Siri anowirirana zvirinani neApple Music paApple TV | IPhone nhau
Pablo Ortega | | Apple tv, iPhone, Noticias, Apple zvigadzirwa
Chimwe chekuodzwa mwoyo kwatakawana muApple TV nyowani inyaya yekuti mubatsiri wezwi Siri haina kunyatso kubatanidzwa neApple Music katarogu. Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi pakupedzisira yakawedzerwa kuterevhizheni uye inoshanda chaizvo, iine yakapusa uye yakajeka interface. Asi izvozvi kana tikabvunza Siri kuti aridze rwiyo, hazvizotiteerere zvakanyanya.
Icho chinhu chisingaitike mune iyo iPhone kana iPad, uko Siri inokwanisa kutamba maartist, maalbum uye nziyo dzatinokumbira. Mamwe midhiya akataura kuti kusangana uku muApple TV kwaizononoka kusvika gore rinouya, asi zvinoita sekunge hatizofaniri kumirira kwenguva yakareba kudaro. Iyo tvOS 9.1 beta zvinoratidza kuti Siri ari kufambidzana zvirinani neApple Music pane yechina-chizvarwa Apple TV.
Mubatsiri wezwi achakwanisa tamba nziyo nemirairo yedu yezwi Uye kwete izvo chete, asi iwe unogona zvakare kutanga kutepfenyura chiteshi cheBeats1 nekukurumidza patinokukumbira iwe. Izvi zvakave zvichisimbiswa nevatangi vekutanga vane mukana weiyi beta iyo yakavhurwa neApple svondo rapfuura.
Hatina moyo murefu nekuti Siri inosangana neApple Music katarogu paApple TVAsi Apple haisati yazivisa zuva apo yekutanga software yekuvandudza yeiyo nyowani seti ichave iripo, saka isu tinofanirwa kumirira.
Kwidziridzo: Apple ichangobva kuburitsa tvOS 9.1 yevashandisi vese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Siri ari kufambidzana zvirinani neApple Music paApple TV
Nhanho nhanho ivo vari kugadzirisa izvo zvinofanirwa kunge zviri pakuenda kwavo.
Apple inoita senge haina basa nekutora chigadzirwa chisina kupera uye kushandisa izombies dzayo (yekutanga kukandwa mudziva pasina kutsvaga mvura) kunatsiridza.
Pindura kuna neuronic08